Hita Ilay Peroviana Mahay Mandray Olona Indrindra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jona 2013 23:54 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, Italiano, русский, Français, srpski, Español
Marisol Rodríguez Gamero, mpianatra Lalàna, 23 taona, no nahazo tamin'ny fifaninànana “The kindest Peruvian” ( Peroviana mahay mandray olona indrindra) [es], hetsika iray hamporisihina ny Peroviana mba hampiseho toetra mendrika sy fihetsika mampisongadina ny hatsaran'izy ireo amin'ireo vahiny mpizaha tany.
Ny fanomezana valisoa ireo teratany Peroviana izay, miaraka aminà karazan'asa maha-te-hidera, mitondra traikefa tsara ho an'ny mpizaha tany vahiny na ny nasionaly no tanjon'ilay fifaninanana nokarakarain'ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny sy ny Fizahan-tany.
Nofintinin'ny tanonkala DePeru.com [es] ireo tanjon'ny fifaninanana [es] ary nozarainy ny vaovao:
Notontosain'[ny Komisionan'ny Fampiroboroboana ny Fanondranana Entana sy ny Fizahantany any Pero] PROMPERÚ io fanentanana io mba hanohizana ny fanetsiketsehana ny fizahantany any Pero ary amin'ny maha-Peroviana anay dia tsy maintsy mandray anjara izahay mba hahazoan'ireo mpizaha tany nasionaly na vahiny ny fandraisana mahafatra-po sy feno fitiavana azy ireo mandritra ny fotoana hijanonany aty amin'ireo toerana fitsidiky ny mpizaha tany aty aminay.
Natolotry ny Filoha Ollanta Humala Tasso sy ny Minisitry ny Raharaham-bahiny sy ny Fizahan-tany, José Luis Silva Martinot, ho an'i Marisol Rodríguez Gamero, 23 taona, mpianatra lalàna, mpandresy tamin'ilay fifaninanana, ny loka tamin'ny Alatsinainy 3 Jona rehefa avy nankalazaina be tao amin'ny fahitalavitra, ny radio sy ny gazety.
Nofinidy i Marisol noho izy tsy niomana mialoha nefa nanaraka mpitaingina bisikileta Soisa anankiroa avy any Limean distrikan'i Pueblo Libre nankany amin'ny fiantsonam-piaramanidina iraisam-pirenenan'i Jorge Chávez. Tamin'ny volana Martsa tamin'ity taona ity, nitaingina bisikileta niaraka tamin'ireo mpizaha tany Soisa izay hiverina hody any an-tanindrazany, namakivaky ny 20 km avy amin'ny fihaonan'ny làlana Brasil [es] sy Bolívar ho any amin'ny fiantsonam-piaramanidina i Marisol.
Làlana mampiavaka an'i Cusco. Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr Héctor de Pereda (CC BY-NC 2.0)
Tojo teo amin'ny sehatra famaranan'ilay fifaninanana i Marisol noho ny fifidianan'ny mpiray taninindrazana aminy azy. Fivahinianan'olon-droa any amin'ny iray amin'ireto toerana telo lafatra ireto : Cusco, Paracas ary Tambopata no loka natolotra.
Novalian'ny tontolon'ny twitter Peroviana tamin'ny karazana fanamarihana tanaty tarehin-tsoratra 140 izany, tahaka ity filazana fohy nataon'i Marca PERÚ (@marcaPERU) ity :
@marcaPERU [es]: Manomboka ny lanonana hifidianana ny #peruanomasamable [Peroviana tsara fandray indrindra]. @peruanoamable #marcaperu [brand Peru]
Nilaza ny fanantenany ny handresen'ny mpifaninana tohanany ny mpampiasa mArTin GV (@MARTINZOTE) :
@MARTINZOTE [es]: Tokony ho ilay MPITANDRO FILAMINANA AVY ANY AREQUIPA no hahazo ny fandresena tamin'ity voalohany ity. Efa an-taonany maro no nanehiany HATSARAM-PANAHY. @marcaPERU @peruanoamable @peruanomasamable
Nolavin'i Lima Cero (@Lima_Cero) izany tamin'ny fampiasana fiteny tsy maoty:
@Lima_Cero: #PTM [es]: Azoko fantarina ve nahoana t*** mihitsy aho no tsy voafidy ho #peruanomasamable ¿? Teneno mafy, ry v**!!! oh andraso !!! cc: @telasopapeo
Nandritra izay fotoana izay, nanazava ny fomba fijeriny i César de lta Porras (@drcesardip) :
@drcesardip: Viendo #peruanomasamable y los galardonados me parecen mas vivos [N. del A: listo, audaz] q amable… En fin 🙂
@drcesardip [es]: Eo am-pijerena ny #peruanomasamable aho, ohatra ny hoe dedaka kokoa fa tsy hoe tsara fanahy ireto tonga tamin'ny famarànana… tsy mampaninona 🙂
Nozarain'i Katty Neciosup (@kttyn) tao amin'ny Twitter ny fahagagany :
@kttyn: INONA!!! #peruanomasamable… fa toa tsy voaantso aho ! Ah, ho an'ny Peroviana lehilahy io ! OK
Mampiseho ny tsy hafaliany i Edwin Gayozzo (@EGayozzo) sady nanolotra soso-kevitra :
@EGayozzo [es]: Ratsy be ity izy. Raha toa ka te-hamporisika ny fitondrantena marina ianareo, dia ataovy amin'ny fampiasam-bola hisian'ny fampianarana TSARA izany fa tsy amin'ny zavatra mampihomehy tahaka izao. #peruanomasamable
Ny hevitry ny teny Espaniola hoe huachafada [es] dia zavatra ratsy, ratsy tsiro sy tsy misy dikany.
Etsy andanin'izay, zarain'i Less Martínez V (@rockazless) ny asa tsara nataony izay tsy nahazo valisoa :
@rockazless [es]: Tsy araka ny fahamarinana izany, niaraka taminà vondrona mpizaha tany enina hatreny amin'ny tora-pasika izaho sy @karenzd nefa tsy nahazo na inona na inona #peruanomasamable
Nofaranan'i @Lima_Cero tamin'ny teny eso nanondroany an'i Natalia Málaga, ilay mpanazatra ny ekipa volley-ball Peroviana zandriny , izay fantatra amin'ny fomba henjana fanaony :
@Lima_Cero [es]: Natalia Málaga no tokony hahazo valisoa #peruanomasamable.